करकापमा परी काममा जुट्नुपर्ने वा विशेष निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला । छर छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुपर्ला । आकस्मिक खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ । पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला । प्रयत्न गर्दा लामो यात्रा गर्ने प्रक्रिया भने अघि बढ्न सक्छ ।
चैत ९ मार्च २२
हेर्नुहोस् यस्तो छ तपाईको आज (शनिबार) को राशिफल, कुन राशिकालाई छ त आज शुभ ?
तपाईको आज मंगलबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त शुभ ?
तपाईको आज (सोमबार) को राशिफल भन्छ–आज यी पाँच राशिकाले दिनुपर्नेछ विशेष ध्यान !